Lium, Adiresy: 747-18, Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul 140-890, Korea Atsimo Tel .: +82 2-2014-6900 ora fiasana: Talata hatramin'ny alahady, 10:30 hatramin'ny 18:00 - Seoul
Adiresy: 747-18, Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul 140-890, Korea Atsimo
Phone: +82 2-2014-6900
Fotoana misokatra: Talata hatramin'ny alahady, nanomboka tamin'ny 10:30 hatramin'ny 18:00
Ny kolontsain'i Korea Atsimo dia nambara fa tsy amin'ny fomban-drazana sy fitsipika misy eo amin'ny fifandraisana. Ao amin'io sehatra fianarana io, ny asa ara-javakanto dia lasa ampahany manan-danja, izay, miaraka amin'ny fanampian'ny borosy maoderina, dia manome endrika ara-nofo amin'ny votoatiny anatiny. Mba hahafantaranao akaiky ny mpahary maoderina sy ny fisehoana fahaiza-manaon'izy ireo, tsidiho ny galeran'ny zavakanto ao Lium.
Expositions et exhibitions
Lium dia tranombakoka tsy miankina manana an'i Samsung. Ao amin'ny faritra be mponina any Seoul , Yongsan izy io. Mandritra izany fotoana izany, ny tontolo manodidina an'i Lium dia tena malaza, satria miorina ao an-tendrombohitra Namsan izy , manomboka amin'ny toerana fisokafan'ny renirano Han.
Na izany aza, afaka mankafy ny toetry ny tanàna any amin'ny toerana hafa ianao, fa ny hahita ny masera Koreana maoderin'ny borosy hanampy an'i Lium ihany. Ny sehatra anatiny ao aminy dia mizara roa ao anatin'ny fizarana roa, izay ambaran'ny famoronana sy ny fomba amam-panao ankehitriny. Ankoatra izany, misy asa maromaro atolotry ny mpanakanto vahiny eto. Ny tranobe dia noforoninà arikanjely anankiroa - ny Frantsay Sean Novell sy ny Botta Mario Botta.
Ny fampiratiana natokana tamin'ny fomban'ny Koreana dia nahafantatra ireo mpitsidika tamin'ny boky, seramika, fampisehoana ny zavakanto bodista, sary hosodoko sy kôligrafy. Mihoatra ny 140 mivoaka ny trano avo amin'ny tranom-bakoka 4 ao amin'ny tranombakoka, maneho ny vanim-potoana mankany amin'ny faritr'i Joseon. Amin'ny ankapobeny, io fanangonana io dia ekena ho ny tsara indrindra amin'ny karazany manerana ny firenena.
Ny efitrano misy ny modernity dia mampiseho ireo vahiny maherin'ny 70 ireo fampiratiana mampiseho ny fampandrosoana ny zavakanto Koreana nanomboka tamin'ny 1910. Indro koa ny asan'ireo mpanakanto vahiny, nanomboka tamin'ny 1945.
Fampahalalana mahasoa ho an'ny mpizaha tany
Ny saran'ny fidirana ao Lyum dia eo amin'ny $ 9, ho an'ny ankizy 3 ka hatramin'ny 18 taona - $ 5. Ny sabotsy sy alahady dia misy fitsidihana maimaim-poana amin'ny teny Anglisy. Ny herinandro dia mitaky fisoratana anarana. Ankoatra izany, misy toro-làlana elektronika azo jerena eto, avy amin'ny fiteny misy - Anglisy, Koreana, Sinoa ary Japoney. Ho an'ny sarany dia azonao atao ny mandidy fitsangatsanganana manokana, izay hanome anao fahafahana hianatra bebe kokoa momba ireo fampiratiana.
Ahoana no hahatongavana any Lima?
Ho famangiana ny tranom-bakoka, tokony haka ny metro faha-6 amin'ny lalana Hangangjin ianao.
Ahoana no ahitanao bodofotsy eo am-pandriana?
Firy isam-bolo no teraka avy ao Yorkies?
Fanatanjahantena ho an'ny faritra anatiny amin'ny feny
Salo ao anaty lafaoro
Mamafy amin'ny volana Janoary
Tsara tarehy ve ny mifatotra saribao amin'ny loha amin'ny ririnina?
Ranomasina Ranomasina - tsara sy ratsy
Hazo maniry ho an'ny ririnina
Mihena ny phosphatase alkaline
Ny volo madinika indrindra
Ahoana no hanesorana ny fofona amin'ny kiraro?
Coral loko amin'ny akanjo
Emilia Clark sy Sam Claflin
Ahoana no ahafantarana fa nanomboka ny nahaterahan'ny lahimatoa?
Ny kohaka lava mitatao amin'ny zaza tsy misy tazo
Fitsaboana amin'ny rano
Herin-taona ho an'ny vehivavy
Fampakaram-bady akanjo lava ho an'ny vehivavy bevohoka